कुन देशका नागरिकले सबैभन्दा बढी मदिरा पिउँछन् ? - टि. एल. एन पोस्ट
Home जानकारी कुन देशका नागरिकले सबैभन्दा बढी मदिरा पिउँछन् ?
कुन देशका नागरिकले सबैभन्दा बढी मदिरा पिउँछन् ?
विश्वमा अनेक अनेक सर्वेक्षण गरिन्छ। सर्वेक्षणका अनौठा नतिजा निस्किन्छन। हालै गरिएको विश्वव्यापी ड्रग सर्वेक्षण अनुसार अस्ट्रेलियन विश्वमै सर्वाधिक मदिरा सेवन गर्नेमा परेका छन् ।
सर्वेक्षण अनुसार दोस्रोमा डेनमार्क र तेस्रोमा फिनल्यान्डका नागरिक देखिए भने अमेरिका र बेलायतका नागरिक मदिरा सेवनमा क्रमशः चौथो र पाँचौँ स्थानमा परेका छन् ।
विश्वका २२ राष्ट्रका ३२ हजार व्यक्तिमा गत डिसेम्बर देखि यो वर्षको मार्च महिनासम्म भएको सर्वेक्षणको नतिजा हालै सार्वजनिक गरिएको हो । कोरोनाको महामारीको बेला मानिसहरू स्वास्थ्यको विषयमा बढी सजग भएको बेलामा यो सर्वेक्षण भएको थियो ।
सर्वेक्षण अनुसार अस्ट्रेलियन वर्षमा औसत २७ पटक मदिरामा झुम हुने गरेको पाइयो । विश्वको औसत मानिस मदिरामा वर्षमा १५ पटक झुम हुने गरेको पाइए पनि अस्ट्रेलियनको सङ्ख्या लगभग दोब्बर भएको पाइयो । अष्ट्रेलियनले सातामा दुई दिन मदिरामा अत्यधिक झुम हुने गरेको बताएका थिए ।
मदिरा पिएर भोलिपल्ट सर्वाधिक पश्चात्ताप गर्नेमा आयरल्यान्डका नागरिक देखिए । मदिरा सेवन गरेको भोलिपल्ट २८ प्रतिशत भन्दा बढीले पश्चात्ताप गर्ने गरेको बताए । यसरी पश्चात्ताप नगर्नेमा भने डेनमार्कका नागरिक देखिए ।
मदिरा सेवन गर्ने बित्तिकै आफूलाई नशा लाग्ने गरेको ४९ प्रतिशतले स्वीकार गरेका छन् । ६ प्रतिशतले कोभिड सङ्क्रमणको डर भएर नपिएको बताए । तपाईँले गत वर्ष कति पटक मदिरा सेवन गर्नु भयो भन्ने प्रश्नमा फ्रान्सका नागरिकहरू अगाडी देखिए । उनीहरूले गत वर्ष १ सय ३२ पटक मदिरा सेवन गरेको बताए भने न्यूजिल्याण्डका नागरिकले १ सय २० पटक पिएको बताएर दोस्रो स्थानमा रहेका थिए ।
Previous articleयी हुन् कांग्रेसमा हालसम्म विजयी आठ पदाधिकारी, पाँच सह–महामन्त्री निर्वाचित हुन बाँकी
Next articleनायिका केकी अधिकारीको आज जन्मदिन , कति वर्षाकि भईन केकी ?
स्वस्थानीमा ‘स्व’ भनेको आफ्नो र ‘थान’ भनेको आफ्नो ठाउँको देवी हो त्यसैले स्वस्थानीको शाब्दिक अर्थ आफू बसेको स्थानको देवी भन्ने बुझिन्छ । आफू बसेकी...
आगो ताप्दा, हिटर बाल्दा, गिजरको प्रयोग गर्दा यी सावधानी अपनाऔँ
देशैभर पछिल्लो समय निकै जाडो बढिरहेको छ। जाडो याममा शरीर वा कोठालाई न्यानो बनाइराख्न आगो ताप्ने, हिटर बाल्ने, गिजरको प्रयोग गर्नेलगायत उपायहरू अपनाइने गरिन्छ...
एप्पलको आइफोन १४ का यस्ता हुनेछन् फिचर्स
TLN Post - December 13, 2021 0
गत सेप्टेम्बरमा एप्पलले आफ्नो फ्लागसिप स्मार्टफोन आइफोन १३ बजारमा ल्यायो । तर, आइफोन १३ बजारमा आउनुअघि नै आगामी आइफोन अर्थात् आइफोन १४ का विषयमा...
टिप्स/जानकारी जाडोमा ‌ओठ फुट्नबाट जोगाउने ५ उपाय
TLN Post - December 6, 2021 0
जाडोको समय धेरै जसो हामॆहर ओठ फुटेर तनावमा हुने गर्दछौ। उचित हेरचाह भएन भने हरबखत ओठ फुटेर रगत नै आउने समस्या पनि देखिन सक्छ।...
यी हुन् काठमाडौंमा दोस्रो डोज अष्ट्राजेनिका खोप लगाउने केन्द्र